ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီစီရင်ပိုင်ခွင့်နှိုင်းယှဉ်ဇယား / စာရင်း
ဤတွင်ဘုံကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတရားစီရင်မှုည့်ကျဇယားတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုအသေးစိတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီအမျိုးအစားတစ်ခုဆောင်းပါးရှိပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အောက်ပါလင့်ခ်တစ်ခုပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
ကျနော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အဆင်ပြေစေရန်, တတ်နိုင်နှင့်အခွန်သက်သာခွင့်များအတွက်တစ်ကြယ်ပွင့်စနစ်ဖြင့်ထိပ်တရားစီရင်မှုအများအပြား rated ပါပြီ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တရားစီရင်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကိုး စား. ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ကမ်းလွန်န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတှေ့အကွုံဆယ်စုနှစ်သုံးခုအပေါ် အခြေခံ. အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဘက်မလိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျကိုအောကျတှငျနှစျခုအရေးကြီးသောကဏ္ဍများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ 1 ။ တစ်ခုချင်းစီကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ကျွန်ုပ်တို့၏ ratings ။2။ သင်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်နောက်ထပ် scroll အဖြစ်ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကိုကြှနျုပျတို့ပွုလမ်းကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
ဘုံကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် Ratings အဖွဲ့
ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးအဘို့အအသုံးအများဆုံးနှင့်လူကြိုက်များနိုင်ငံများတွင်အချို့ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အတွေ့အကြုံနီးပါး 30 နှစ်ပေါင်းနဲ့အတူကျနော်တို့ကြိုက်တယ် နေးဗစ် LLC (ကျွန်ုပ်တို့၏သာ 5-ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️) အများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်လိမ်လည်မှုစီးအနင်းအဘို့န့်အသတ်တစ်ခုအတိုပညတ်တော်အတိုင်းရှိပါတယ်။ သငျသညျနှစျခုနှစ်တွင်အချိန်သက်တမ်းကုန်သွားပြီပြီးနောက်နေးဗစ်တရားရုံးပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းရန်စိန်ခေါ်မှုများမကြားပါလိမ့်မယ်နေးဗစ်အတွက် LLC သို့ပိုင်ဆိုင်မှုနေရာတခါအကြောင်း, ဆိုလိုသည်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး LLC သည်၌သူ၏အဖွဲ့ဝင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အားသွင်းနိုင်ရန် get မပါလျှင်ဒုတိယအ, စီရင်တော်မူခြင်းအတိုသုံးနှစ်ကာလအတွင်းကုမ္ပဏီ၏ချွတ်ကျရောက်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအားသွင်းအမိန့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမရှိကြပေ။ ထို့အပြင် setup ကိုကုန်ကျစရိတ်ကအခြားတရားစီရင်မှုထက်နိမ့်သည်။ နေးဗစ်ဟာတတ်နိုင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်မြင့်မားတဲ့အဆင့်။ Plus အား, နေးဗစ်ကိုအလငျြအမွကုမ္ပဏီများမှဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုအဆငျ့လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ဤကာရစ်ဘီယန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုမှန်မှန်အပ်ဒိတ်နှင့်ခေတ်သစ်လိုအပ်ချက်များကိုအတူတက်ထားရန်နှင့်အခြားဘဏ္ဍာရေးဟေဗန်ကူးထားတဲ့အစွန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့က၎င်း၏ဥပဒေပြုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နိုင်ငံများရှိကုမ္ပဏီများသည်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဒီတော့နေးဗစ်အကြံပြုဘို့ငါတို့ရည်ရွယ်ချက်ကကဒီမှာဖော်ပြထားမှသာကဲ့သို့ဖြစ်၏။
အန်ဂွီလား LLC ⭐️⭐️⭐️
ဂွါ IBC ⭐️⭐️⭐️
ဂွါ LLC ⭐️⭐️⭐️
အယူးဘား LLC ⭐️⭐️⭐️
သြစတြီးယား LLC / GmbH သည် ⭐️⭐️
ဘဟားမား LLC ⭐️⭐️⭐️
ဘဟားမား sac ⭐️⭐️⭐️
ဘာရိန်း LLC ⭐️⭐️
ဘာရိန်းကျုံ့သွားစေပါတယ် - Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ⭐️⭐️
ဘာရိန်း SPC - လူပျိုပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီ⭐️⭐️
ဘာဘေးဒိုးစ IBC ⭐️⭐️⭐️
ဘာဘေးဒိုးစ LLC ⭐️⭐️⭐️
ဘယ်လ်ဂျီယံ LLC / BVBA
ဘေလီဇ် LDC ⭐️⭐️⭐️⭐️
ဘေလီဇ် LLC ⭐️⭐️⭐️
ဘာမြူဒါ LLC ⭐️⭐️
ဘာမြူဒါ sac - အသားအရောင်ခွဲခြား Accounts ကိုကုမ္ပဏီ⭐️⭐️
Bonaire ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းမှ ⭐️⭐️
Bonaire BV - ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ⭐️⭐️⭐️
ဘရာဇီး LLC လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ⭐️⭐️
ဘရူနိုင်းဆကျကပျဆဲလ်ကုမ္ပဏီများ / DCC ⭐️⭐️
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ⭐️⭐️
ဘရူနိုင်းလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️
ဘူလ်ဂေးရီးယားပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (OOD) ⭐️
BVI ကော်ပိုရေးရှင်း ⭐️⭐️⭐️
BVI LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
ကေမန်ကျွန်းများဖောင်ဒေးရှင်းမှကုမ္ပဏီ / FC အသင်း ⭐️⭐️⭐️
ကေမန်ကျွန်းများ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
ကေမန်ကျွန်းများက Non-ဌာနေကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
ကေမန်ကျွန်းများအသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio ကုမ္ပဏီ (SPC) ⭐️⭐️⭐️
ချီလီလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SRL) ⭐️⭐️
တရုတ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - တစ် WFOE ဖွဲ့စည်း ⭐️⭐️
ကော်မ္မရိုဇ့်ကျွန်းလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
ကွတ်ကျွန်းစုလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️⭐️
ကော့စတာရီလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
ရူရာအခွန်ကင်းလွတ် NV ကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ⭐️⭐️
ဆိုက်ပရပ်စ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️
ဒိန်းမတ်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ⭐️⭐️
ဒိုမီနီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ⭐️⭐️⭐️
ဒိုမီနီ PLLC ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ LLC ⭐️⭐️⭐️
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအခွန် LLC ကင်းလွတ်ရန် ⭐️⭐️⭐️
ဒတ်ခ်ျ BV ကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
အီဂျစ် LLC ⭐️⭐️
ဖင်လန် LLC ⭐️⭐️
ပြင်သစ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (Sàrl) ⭐️⭐️
ဂျာမန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
ဂျီဘရောလ်က Non-ဌာနေကုမ္ပဏီများ ⭐️⭐️⭐️
ဂရိ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ / EPE ⭐️⭐️
နေးဒါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ⭐️⭐️⭐️
ဂူအမ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️⭐️
ဂွာတီမာလာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SRL) ⭐️⭐️
ဂါဇီးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ICC က) ⭐️
ဂါဇီး LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ ⭐️
ဂါဇီး Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ⭐️⭐️
ဂိုင်ယာနာပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (PLLC) ⭐️⭐️⭐️
ဟောင်ကောင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ဖွဲ့စည်းခြင်း ⭐️⭐️⭐️
ဟန်ဂေရီလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
အိုက်စလန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
အိန္ဒိယ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️
အိုင်ယာလန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
နှစ်ချက်အိုငျးရစျဒတျချြ Sandwich ကအခွန်ချွေတာသုံးစွဲ
က Man Corporation ၏ကျွန်း ⭐️⭐️
က Man ကင်းလွတ် Corporation ၏ကျွန်း ⭐️⭐️
က Man ဖောင်ဒေးရှင်းကျွန်း ⭐️
က Man Hybrid ကို Company ၏ကျွန်း ⭐️⭐️⭐️
က Man လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရား Company ၏ကျွန်း (LLC) ⭐️⭐️
က Man နယူးအဘိဓါန် Manx- ယာဉ်၏ကျွန်း (NMV) ⭐️⭐️
က Man ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်မိတ်ဖက် / PLP ၏ကျွန်း ⭐️⭐️
က Man Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ၏ကျွန်း ⭐️⭐️
ဣသရေလအမျိုးသည် LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ⭐️⭐️
အစ္စရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း | စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Start ကို-Up ကို5လွယ်ကူခြေလှမ်းများ
အီတလီSocietàတစ်Responsabilità Limitata (Srl) ⭐️⭐️
ဂျမေကာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
ဂျာစီ Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ⭐️⭐️
Labuan ကော်ပိုရေးရှင်း ⭐️⭐️
Labuan ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ⭐️⭐️
Labuan Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ⭐️⭐️⭐️
လတ်ဗီးယားလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (SIA) ⭐️⭐️
လိုင်ဘေးရီးယား LLC ⭐️⭐️⭐️
လီချင်စတိန်း LLC ⭐️⭐️⭐️
အာနီယံပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (UAB) ⭐️⭐️
လူဇင်ဘတ် Holding ကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️
လူဇင်ဘတ် LLC လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SARL) ဖွဲ့စည်းခြင်း ⭐️⭐️
လူဇင်ဘတ် SOPARFI ⭐️⭐️⭐️
မကာအိုကမ်းလွန်အရန်ကုမ္ပဏီ (OAC) ⭐️⭐️⭐️
မကာအိုကမ်းလွန်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုမ္ပဏီ (OCC) ⭐️⭐️⭐️
Madeira ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း & Setup ကိုပြန်ကြားရေး ⭐️⭐️⭐️
Madeira ကော်ပိုရေးရှင်း ⭐️⭐️⭐️
Madeira ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ / Lda ဖွဲ့စည်းခြင်း ⭐️⭐️⭐️
Madeira SGPS ကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
မလေးရှား Labuan အင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ⭐️⭐️
မော်လ်ဒိုက်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
မော်လ်တာ IBC / နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
မော်လ်တာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
မာရှယ်ကျွန်းစု IBC / နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
မာရှယ်ကျွန်းစု LLC လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ⭐️⭐️⭐️
မောရစ်ရှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း GBC II ကို ⭐️⭐️⭐️
မောရစ်ရှ GBC ငါဒေသခံကုမ္ပဏီ ⭐️
မက္ကစီကို LLC (Sociedad က de Responsabilidad Limitada) ⭐️⭐️
Micronesia လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
မိုနာကိုလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (SARL) ⭐️⭐️
မွန်တီနီဂရိုးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️
မွန်ဆာရတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ⭐️⭐️
မွန်ဆာရတ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
Nauru ကျွန်းအင်တာနေရှင်နယ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ⭐️⭐️⭐️
နေးဗစ် IBC / နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️⭐️
ကွတ်ကျွန်းစု LLC vs. နေးဗစ် LLC
နေးဗစ် LLC ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ခံထားရသောကုမ္ပဏီ
နေးဗစ် LLC ကောင်းကျိုးများ
နေးဗစ် Multiform ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ⭐️⭐️⭐️
နေးဗစ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ - Corporation & LLCs
နယူးဇီလန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
နီကာရာဂွာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SCRL) ⭐️⭐️
နီယူး LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
ပိုလန် LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️
ပေါ်တူဂီပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (Lda) ⭐️⭐️
Puerto Rico ကော်ပိုရေးရှင်း ⭐️⭐️⭐️
Puerto Rico လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
ရိုမေးနီးယား Joint Stock Company (SA) ⭐️⭐️⭐️
ရိုမေးနီးယားလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
ရုရှားနိုင်ငံလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
ဆာမိုအာအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ (IC) ⭐️⭐️⭐️
ဆာမိုအာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️⭐️
seychelles ကော်ပိုရေးရှင်း ⭐️⭐️⭐️⭐️
seychelles လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️⭐️
seychelles အထူးလိုင်စင်ကုမ္ပဏီ (CSL) ⭐️⭐️⭐️
စင်္ကာပူကင်းလွတ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ / EPC ⭐️⭐️⭐️
စင်္ကာပူပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ⭐️⭐️⭐️
ဆလိုဗက်ကီး (SRO) ⭐️⭐️⭐️
စပိန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️
စပိန်နယူးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SLNE) ⭐️⭐️⭐️
စိန့်လူစီယာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ⭐️⭐️⭐️
စိန့်လူစီယာ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
စိန့် Maarten ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (BV) ⭐️⭐️⭐️
စိန့်မာတင်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းမှ / SPF ⭐️⭐️⭐️
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း IBC ⭐️⭐️⭐️
စိန့်ဗင်းဆင့် IBC / နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
စိန့်ဗင်းဆင့် LLC | ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ⭐️⭐️⭐️
ဆူရာနမ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (NV) ⭐️⭐️
ဆူရာနမ်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း (SPF) ⭐️
ဆွီဒင်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (AB) ⭐️⭐️
ဆွစ်ဇာလန်ကော်ပိုရေးရှင်း / SA ⭐️⭐️
ဆွစ်ဇာလန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SARL) ⭐️⭐️⭐️
တူရကီလီမိတက် Sirket ကုမ္ပဏီ (LS) ⭐️⭐️
တူရကီနှင့်ကိုင်းကော့စ် IBC / နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
Tuvalu အဘိဓါန် IBC / နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️⭐️
အမေရိကန် Virgin Islands ကော်ပိုရေးရှင်း ⭐️⭐️⭐️
အမေရိကန် Virgin Islands LLC ⭐️⭐️⭐️⭐️
ယူအေအီးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️
ယူအေအီး Rak / LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ ⭐️⭐️
ယူအေအီး Rak ကမ်းလွန်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ (IBC) ဖွဲ့စည်းခြင်း ⭐️⭐️⭐️
ဗြိတိန်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားမိတ်ဖက် (LLP) ⭐️⭐️⭐️
ဗြိတိန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (LLC) ဖွဲ့စည်းခြင်း ⭐️⭐️⭐️
ဗြိတိန်ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ⭐️⭐️⭐️
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် ⭐️⭐️⭐️
ဥရုဂွေးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️
အမေရိကန်ဗာဂျင်ကျွန်း (USVI) ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း & နှင့်မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့် ⭐️⭐️⭐️
အမေရိကန် Virgin Islands လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ⭐️⭐️⭐️⭐️
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ Ratings အဖွဲ့မှကိုလမ်းညွှန်
အန်ဂွီလား - အန်ဂွီလားတစ်ဦးကိုဗြိတိန်နယ်မြေဖြစ်တယ်, ဒါတစ်တည်ငြိမ်အစိုးရနှင့်စည်းမျဉ်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ အဖြစ်နေးဗစ်အဖြစ်အဆင်သင့်ပေမယ့်အနုတ်လက္ခဏာဘာမျှမဟုတ်ဥပဒေပြဌာန်းဒီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသတိရလာပါတယ်။
ဂွါ - မျှမျှတတခြုံငုံကောင်းသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဥပဒေပြု "လည်းငါ့ကို" ဖြစ်ပါတယ်နှင့်နေးဗစ်မှာသူတို့ရဲ့အနီးအနားမှာပြိုင်ဘက်အတူတက်မစောင့်သိရသည်။
ယူးဘား - ဗင်နီဇွဲလားကမ်းရိုးတန်းနှင့်နယ်သာလန်၏နိုငျငံတျော၏အစိတ်အပိုင်းများ၏ချွတ်ကာရစ်ဘီယံတွင်တည်ရှိပြီး။ တရားဝင်ဘာသာစကားများအင်္ဂလိပ်, ဒတ်ခ်ျနှင့်ဒေသခံ Papiamento အဘိဓါန်ဖြစ်ကြသည်။ တည်ငြိမ်အစိုးရနှင့်ကာရစ်ဘီယံအတွက်ပိုမိုလုံခြုံကျွန်းများတဦး။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် LLC ဖွဲ့စည်းရေးအဘို့ A ကောင်းဆုံးရှေးခယျြမှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့အကြိုက်ဆုံးကာရစ်ဘီယံထဲမှာသွားရောက်ရာအရပျ, ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီဥပဒေပြဌာန်းဘို့နေးဗစ်အဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး။
ဘဟားမား - တစ်ဦးကိုယခင်ချန်ပီယံ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဥပဒေပြုအချိန်ကာလအတူတက်မစောင့်သိရသည်။ Plus အား, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအကြိုးခံစားခှငျ့စံချိန်သိရသည်။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲဆိုးပေမယ့်မပေးယင်း၏အတိတ်ဂုဏ်သတင်းအဖြစ်ကိုအဆငျ့မွငျ့အဖွစျ။
ဘာရိန်း - ဒေသခံများ၏မျက်နှာသာအတွက်ကာကွယ်ဥပဒေပြဌာန်းနှင့်မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာလည်းမရှိသည့်အခါဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ၏မျက်ခုံးမြှင့်။
ဘာဘေးဒိုးစ - လျောက်ပတ်သောဥပဒေပြဌာန်းပေမယ့်အထူးဘာမျှမ ... သင်သည်ကနေဒါတှငျနထေိုငျမဟုတ်လျှင်။ ကနေဒါနိုင်ငံသားအခှနျအကြိုးကြေးဇူးမြားကိုရရှိစေနိုင်သည်။ ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အမှန်သည်ဆိုပါကကြည့်ရှုရန် Chartered ဘဏ်ဟာစာရင်းကိုင်နှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါဒါပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဦးတည်းဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။
belize - အလွန်ကောင်းသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အခြားသောဒေသများအတွက် LLC မှအကြမ်းဖျင်းညီမျှသည်အရာဟာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ, ကြိုက်တယ်။ စားပွဲအရောင်းအအောက်မှလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့်ငွေဘေလီဇ်စီးတီးတှငျအမြားအပေါင်းမြင့်မားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဟာသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုဆီးတား။ (ကမ်းရိုးတန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဇုန်အတွက်သျောလညျး, မျှမျှတတလုံခြုံ။ ) ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကာရစ်ဘီယံဒေသဘဏ်လုပ်ငန်းစင်တာများတစ်ခုမှာ။ ထက်နည်း $ 250,000 ဘို့ကောင်းတယ်။ ကြောင်းအထက်ဘာမှအဘို့ကျွန်တော်တစ်ဦးနေးဗစ် LLC သို့မဟုတ်ဘေလီဇ် LDC ပေါင်းဆွစ်ဇာလန်, လူဇင်ဘတ်သို့မဟုတ်လီချင်စတိန်းဘဏ်အကောင့်နှင့်အတူလိုက်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို Call နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဲဒီလိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဘာမြူဒါ - က၎င်း၏ရှည်လျားသော outworn ဟောင်းတဦးဂုဏ်သတင်းအပေါ်မှီခိုရာတစ်ဦးကဟောင်းကချန်ပီယံ။ တစ်ဦးကစည်းမျဉ်းအိပ်မက်ဆိုး။ သူတို့ရဲ့ဥပဒေပြုအချိန်ကာလနောက်ကွယ်မှဖြစ်နေဆဲဆိုတဲ့အချက်ကို၏ကြားမှများစွာသောအခြားတရားစီရင်မှုထက်ဆယ်ပါးတဆယ်ဖို့ဆပိုစျေးကြီး (နေးဗစ်, ကွတ်ခ်ကျွန်းစုဘေလီဇ်နှိုင်းယှဉ်) ။ အခြားအတရားစီရင်မှုထက်ဖွဲ့စည်းရန်အများကြီးပိုရှည်ကြာပါသည်။ ကြောင့်လုံ့လဝီရိယတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများကို (သိကြ-သင့်ရဲ့-client ကို) သတင်းအချက်အလက်တသမတ်တည်းနောက်ထပ်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယတောင်းဆိုမှုများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ တော့ဘူးသွားရောက်ကြည့်ရှုသော်လည်းမဒါကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးအဘို့အဖို့တစ်ဦးကလှပသောနေရာအရပ်။ သူတို့ရဲ့အတိတ်ဂုဏ်သတင်းနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုမသုံးပါနဲ့။ ဒီနေ့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသုံးပါနှင့်သူတို့ပိုက်ဆံဒါမှမဟုတ်လုပ်ရတဲ့တန်ဖိုးရှိမဟုတ်နားလည်သဘောပေါက်။ ဤလှပသောရာအရပ်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပေမယ့်တခြားနေရာကုမ္ပဏီဖွင့်ထား၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သူတို့တစ်တွေပေးသူ (အတန်ငယ်ဟန်ဆောင်သော်လည်း) ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်မျှမျှတတကောင်းစွာ-လေးစားဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍနှင့် seasoned ခဲ့ကြပါဘူး။ ပိုက်ဆံရိပ်မိဂုဏ်သိက္ခာထက်လျော့နည်းအရေးကြီးပါတယ်, သင်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦး Rolex ထက် Patek Philippe (ကအလွန်စျေးကြီးတဲ့လက်ပတ်နာရီတစ်လုံး) ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ။ ကျနော်တို့ကဒီမှာကုမ္ပဏီတွေအတော်များများတည်စေပြီ။
Bonaire - အဆိုပါနယ်သာလန်၏အပိုင်း, ဒီဒတျချြ-controlled ကျွန်းသွားရောက်လှပတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒကောင်းသောပေမယ့်ဒေသတွင်း၌အခြားသူများထက်သာလွန်သည်မဟုတ်။
ဘရာဇီး - အချိန်-စားသုံးစည်းမျဉ်းအိပ်မက်ဆိုး။ (ခဏကြာသော) ဖက်ဒရယ်အစိုးရဆီကခွင့်ပြုချက်၏တံဆိပ်ခတ်လိုအပ်ကြောင်း, ထို့နောက် (ခဏတစ်ပိုပြီးကြာ) ကိုပြည်နယ်နှင့်မြူနီစီပယ် (မြို့) အစိုးရ (ထို ပို. ပင်အချိန်ယူ) ။ ကျနော်တို့ကြိုတင်ထံမှခွင့်ပြုချက်မပါဘဲဗျူရိုကရေစီ၏ပထမဦးဆုံးအလွှာကနေခွင့်ပြုချက်မရနိုင်ပါ။ အစိုးရအရာရှိများ (ဥပဒေရေးရာမဟုတ်သောအရာ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်) လာဘ်ပေး, လာဘ်ပေးဆောင်နေကြမဟုတ်လျှင်မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှေးကွေးသိပါပြီ။ သငျသညျဘရာဇီးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြုရမည်ဆိုပါကသာလျှင်ဒီမှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်။ ကျနော်တို့မြောက်မြားစွာဘရာဇီးကုမ္ပဏီများမှဖွဲ့စည်းခဲ့ပါပြီ။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကဒီမှာတစျခုဖွဲ့စည်းရန်ရှိပါကသင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်မေးမြန်းခြင်းများကဲ့သို့ခံစားမိလျှင်ဒီတော့ "အဘယ်ကြောင့်ဒီအဤမျှကာလပတ်လုံးတာဖြစ်ပါတယ်?" အံ့သြသွားဖြစ်ပါဘူးအခုတော့သင်သိ။
British Virgin Islands (BVI) - အလွန်အမင်းစညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်လာခဲ့သည်ဟောင်းများချန်ပီယံတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။ အဆိုပါအားပြိုင်မှုများကများနှင့်အားပြိုင်မှုအဘို့, အားပြိုင်မှုတစ်ကဏ္ဍဖြစ်လာသည်။ သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းများနိမ့်ခဲ့ကြနှင့်သူတို့၏ဥပဒေများကိုသာလွန်ဖြစ်လျှင်ဒါကလက်ခံနိုင်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ မျှမျှတတကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းရေးအခကြေးငွေသော်လည်းသူတို့၏ဥပဒေများကိုလက်ရှိတောင်းဆိုချက်များကိုအတူတက်မစောင့်ရပါ။ ဒေသတွင်း၌တစ်ဦးကုမ္ပဏီဒါပေမဲ့တခြားတရားစီရင်မှုဖွဲ့စည်းရန်နေရာကောင်းတစ်ခုပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။
ဘရူနိုင်း - လျောက်ပတ်သောစည်းမျဉ်းများ, အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြည်နယ်၏ဦးခေါင်း, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီများသည်ဘာမျှမမွကွေီးပျေါမှာချိုးဖြစ်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီများ 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များနိမ့်ဆုံးရှိနိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဒုတိယရုံးသုံးဘာသာစကားသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယား - ဂရိနှင့်တူရကီ၏မြောက်အမေရိက။ ပင်လယ်နက်ထိ။ ဒါကြောင့်အီးယူ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကဒီကနေကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြုကြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်က PayPal ကသို့မဟုတ်အမေဇုံအကောင့်ချင်သောသူတို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကေမန်ကျွန်းစု - ယခင်ထိပ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏တဦးတည်း။ သို့သော်နေးဗစ်နှင့်ကွတ်ကျွန်းစုများနှင့်မတူဘဲဥပဒေများပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်လက်ရှိတောင်းဆိုချက်များကိုအတူတက်မစောင့်ရပါ။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးအများကြီးပိုကောင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုရှိသည်သောအခြားအလူကြိုက်များတရားစီရင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်စျေးကြီးသည်။ ၎င်း၏ယခုအမှန်အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းမရှိနိုင်သောအဖိုးအခကိုအပြစ်လွတ်စေကြိုးပမ်းမှုအတွက်၎င်း၏အတိတ်ဂုဏ်သတင်းအပေါ်ဦးခေါင်း-in-the-သဲမှီခို။
ချီလီ - အလွန်စျေးကြီးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအခကြေးငွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည်အထိကုမ္ပဏီ $ 1200 နှင့်တစ်လလျှင် $ 3500 ပေါင်းတစ်လလျှင် $ 750 ပေါင်းအုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေအတွက်တစ်လလျှင်အကြောင်းကို $ 990 မှာဥပဒေရေးရာလိပ်စာအကြားတစ်ဦးကိုဒေသခံစီမံခန့်ခွဲသူ (မဖြစ်မနေ) လိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်။ ချီလီဗဟိုဘဏ်၏နိုင်ငံခြားသုံးငွေစည်းမျဉ်း Compendium ၏အခနျး XIV ၏စည်းမျဉ်းများရှိပါသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ဒေသခံပညာရှင်များအခွန်ဝန်နှင့်ဝင်ငွေအထောက်အထားအပေါ်အကွံဉာဏျမြားအပါအဝငျမြို့တော်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်၏ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်, များအတွက်အခွန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအခြားရွေးချယ်စရာအဆိုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ - ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားခွင့်ပြုသူအပေါ်အလွန်တင်းကျပ်။ အကုန်အစင်ပိုင်ဆိုင်သောနိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနိုင်ငံခြားသားများပိုင်ဆိုင်နိုငျသောအနည်းငယ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ခုမှငါးလအတွင်းယူနိုင်သောအလွန်စျေးကြီးနှင့်အချိန်-စားသုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအစိုးရကိုတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားငျြးပွညျ့မီလျှင်သာအတည်ပြုခဲ့ပါလိမ့်မည်။ အားလုံးကတော့အမျိုးအစားများကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်အမျိုးအစားများစာရင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲသွားကြသည်။ ပိုင်ရှင်သိသိသာသာအရင်းအမြစ်များနှင့်တည်ဆဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြသရန်လိုအပ်သည်။ န်ထမ်းများအတွက်လစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအပါအဝင်မြို့တော်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဘတ်ဂျက်နှင့်အစီအစဉ်ကိုဆက်ရမည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီတင်သွင်းခဲ့တဲ့မတိုင်မီရုံးခန်းငှားရမ်းပြသရမည်ဖြစ်သည်။
ကော်မ္မရိုဇ့် - အရှေ့, အာဖရိကကမ်းခြေအနီးတွင်မိုဇမ်ဘစ်နဲ့ဒါဂတ်စကာများအကြားတည်ရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများ, 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, privacy ကိုလည်းတစ်ခုတည်းသောမန်နေဂျာနိမ့်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်များနှင့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်: တစ်ဦးကကော်မ္မရိုဇ့် LLC ကဤအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်များဆီးခုံမို့မို့မရှိကြပေ။ မန်နေဂျာများဖြစ်ကြသည်။ ဆန်ခါတင်မန်နေဂျာရရှိနိုင်ပါသည်။
ကွတ်ကျွန်းစု - ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. အကောင်းဆုံးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။ LLCs နှင့်ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နေးဗစ်နောက်ကွယ်မှဒုတိယအအကောင်းဆုံးတရားစီရင်မှု, ။
ကော့စတာရီကာ - ယခင်လူကြိုက်များ။ အခွားသောတရားစီရင်မှုစံချိန်ပါပြီ။
ရူရာ - ဗင်နီဇွဲလား၏ကာရစ်ဘီယံမှာတော့မြောက်ဘက်။ နယ်သာလန်၏နိုငျငံတျော၏တစ်ဦးကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်။ ဒတ်ခ်ျနှင့်အင်္ဂလိပ်အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများ။ တစ်ဦးက ရူရာအခွန် NV ကင်းလွတ်ရန် 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသို့မဟုတ်အနိမ့်အခွန်အခများကိုလည်းတစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်: ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ။ သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကောင်းတဲ့နေရာအရပ်များနှင့်လျောက်ပတ်သောကုမ္ပဏီအထုံးအဖွဲ့တို့ကို။
ဆိုက်ပရပ်စ် - အမေရိကန်များထက်ဥရောပသားတို့အတွက်ပိုမိုလူကြိုက်များ။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းအကျပ်အတည်းနှင့်အလွန်အကျွံအစိုးရကြွေးမြီကအနက်ရောင်မျက်စိအပ်ပေးတော်မူ၏။
ဒိန္းမတ္ - ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးကိုသင်မူကား, ဒိန်းမတ်, အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအကျိုးခံစားခွင့်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်။
ဒိုမီနီ - ကာရစ်ဘီယံအတွက်ပိုကောင်းတဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုမှာပေမယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်နေးဗစ်အဖြစ်နီးပါးအဖြစ်အကျိုးရှိသောမဟုတ်ပါဘူး။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့်အစိုးရအရာရှိများမှစားပွဲပေါ်မှာငွေပေးချေမှုအောက်မှာအသက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒတျချြ / နယ်သာလန် - ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးကိုသင်မူကား, ဒီမှာမသိသိသာသာအကျိုးခံစားခွင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်။ ဝမ်းနည်းပါတယ်, ယခင်ကကြီးမားသောလူထုကုမ္ပဏီများမှအသုံးပြုသောဟောင်း "ဒတ်ခ်ျ Sandwich က" အခွန်-saving အစီအစဉ်ကိုမရရှိနိုင်နိုင်တော့ပါ။
အဲဂုတ္တုပြည်၌ - အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအကျိုးရှိ။
အက်စ်တိုးနီးယား - အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအကျိုးရှိ။
ဖင်လန် - ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးကိုသင်မူကား, ဖင်လန်မရှိသိသိသာသာအကျိုးခံစားခွင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်။
ပြင်သစ် - ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးကိုသင်မူကား, ပြင်သစ်မရှိသိသိသာသာအကျိုးခံစားခွင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်။
ဂျာမနီ - ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးကိုသင်မူကား, ဂျာမနီမရှိသိသိသာသာအကျိုးခံစားခွင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်။
ဂျီဘရောလ် - မျှမျှတတကောင်းသောဒါပေမဲ့ကာရစ်ဘီယံနှင့်တောင်ပစိဖိတ်ယှဉ်ပြိုင်မကိုက်ညီပါဘူး။
ဂရိနိုင်ငံ - လေးလေးနက်နက်ကြွေးမြီတိုင်းပြည်နှင့်အထူးအလျှင်းမ။ သင်ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်မဟုတ်လျှင်ဝေးနေပါ။
နေးဒါ - မျှတသောပေမယ့်အထူးဘာမျှမ။ တာဝန်ရှိသူများအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂူအမ်ကျွန်း - တစ်ဦးကအမေရိကန်ပိုင်နက်အနည်းငယ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, အထူးဘာမျှမ။
ဂွာတီမာလာ - အထူးအဘယ်အရာကိုမျှ။ အန္တရာယ်နှင့်မြင့်မားသောရာဇဝတ်မှုတိုင်းပြည်။
ဂါဇီး - စည်းမျဉ်းဥပဒေ amok ကို run ။ စိတ်ရှုပ်စရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်စည်းမျဉ်းအိပ်မက်ဆိုး။ ဝေးနေပါ။
ဂိုင်ယာနာ - အထူးအဘယ်အရာကိုမျှ။
ဟောင်ကောင် - အားကောင်းတဲ့စီးပွားရေးနှင့်တရုတ်၏တစိတ်တပိုင်းနှင့်အတူတိုင်းဒေသကြီး။ အများကြီးပိုလွယ်ဒီမှာတရုတ်ထက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်လျော့နည်းစျေးကြီး။ ကုမ္ပဏီပေမယ့်လက်မှတ်ရေးထိုးဖွဲ့စည်းရန်ကဒီမှာသွားလာရန်မလိုအပ်ကြောင်းဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ဒီနေရာကိုသွားလာရမည်ဖြစ်သည်။
ဟန်ဂေရီ - အထူးအဘယ်အရာကိုမျှ။
အိုက်စလန် - တင့်တယ်အံ့သြစရာလူတို့နှင့်အတူတိုင်းပြည်၏ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းအထူးချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏။
အိႏၵိယ - တည်ထောင်ရန်မျှမျှတတခဲ။ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် LLCs 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်တွေရှိသည်နိုင်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အကောင့်တစ်ခုစာရင်းစစ်ကြေညာချက် file ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးများအိန္ဒိယတွင်ကျင်းပရပါမည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များ, ဒါရိုက်တာ, စာရင်းစစ်များနှင့်ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများမှတ်တမ်းများအများပြည်သူစံချိန်တစ်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
အိုင်ယာလန် - အလွန်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့, အနိမ့်ခွန်, အင်္ဂလိပ်စကားပြော, တည်ငြိမ်အစိုးရ။ ကုမ္ပဏီဒေသခံတစ်ဦးမှဒါရိုက်တာရှိသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်သင်အနေနဲ့အာမခံနှောင်ကြိုးပေးဆောင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လူသား၏ကျွန်း - စိတ်ပျက်စရာစကားလုံးတစ်လုံးအတွက်။ စိတ်ရှုပ်စရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်: အနည်းငယ်စကားများဖြစ်သည်။ ယခင်ကကြီးမားတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူယခင်ကလူကြိုက်များအခွန်-ဆိပ်။ သို့သော်ယခုတစ်စည်းမျဉ်းအိပ်မက်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလွန်အကျွံကြောင့်လုံ့လဝီရိယ (ကိုသိ-သင့်ရဲ့-ဖောက်သည်) စာရွက်စာတမ်းများပေးထားကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ပိုမိုစာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ဖို့တောင်းလျှင်, အံ့သြသွားဖြစ်ပါဘူး။ သင်ပိုမိုစာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ပြီးတာနဲ့ပိုတောင်းဆိုချက်များကိုများအတွက်အံ့သြသွားဖြစ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့-ဒါ-အထူးမဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီရရှိရန်စိတ်ပျက်အတော်ကြာကျည်ပြီးနောက်သင်နေးဗစ်နှင့်အတူထွက်သွားဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်။
ဣသရလေ - မျှမျှတတကောင်းသောစီးပွားရေးကို။ သငျသညျ (အများကြီးလုပ်ပေးထားတဲ့) ဣသရေလအမျိုးအားအထူးနှလုံးပါကွန်နက်ရှင်ရှိသည်သို့မဟုတ်သင်ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နေကြဘဲနေလျှင်, ဥပဒေများသည်အခြားတရားစီရင်မှုထက်သိသိသာသာပိုကောင်းမရှိကြပေ။ မဟုတ်လျှင်
အီတလီ - အထူးအဘယ်အရာကိုမျှနှင့်အထူးသဖြင့်မကောငျးစီးပွားရေးမှာ။
ဂျမေကာ - သောက၎င်း၏အိမ်နီးချင်းအတော်များများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအထူးအဘယ်အရာကိုမျှ။ အန္တရာယ်များနှင့်မြင့်မားသောရာဇဝတ်မှု။
ဂျာစီ - မခွဲခြားဘဲ၎င်း၏ဟောင်းတဦး status ကိုအထူးအဘယ်အရာကိုမျှ။ အထက်က Man ဖော်ပြချက်၏ကျွန်းကိုကြည့်ပါနှင့်တိုင်းပြည်အတူကအစားထိုးရန် "ဂျာစီ။ "
Labuan - တစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်ကုမ္ပဏီများသည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်မျှမျှတတလွယ်ကူသည်။ အင်္ဂလိပ်အဖြစ်များသည့်ဥပဒေအောက်ပါအတိုင်း။ အာရှနှင့်အစ္စလာမ့်နှစ်ဦးစလုံးယဉ်ကျေးမှု။
လတ်ဗီးယား - အထူးအဘယ်အရာကိုမျှ။ လူကြိုက်အများဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်အတိတ်တွင်စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိခဲ့ပါတယ်ပြန်လာသေး၏။
လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ - သင်အာဖရိကမှာနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, လိုက်ဘေးရီးယားနှင့်တောင်အာဖရိကထိုသို့ပြုမှအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးသောအရပ်တို့ကိုမနှစျယောကျဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျဖြစ်စေတိုင်းပြည်သွားရောက်အစီအစဉ်ရှိပါကလိုင်ဘေးရီးယားအန္တရာယ်များ၏အန္တရာယ်ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိကအန္တရာယ်များ၏အနည်းငယ်ပိုလုံခြုံဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လီချင်စတိန်း - အလွန့်အလွန်မြင့်မားတဲ့နှုန်း-ဦးချင်းဝင်ငွေ; အမြင့်ဆုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတဦး။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အခြားတရားစီရင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိုအပ်သောကြောင့်-လုံ့လဝီရိယ၏အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့်အတူစျေးကြီးသည်။ ခိုင်မာတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ။
အာနီယံ - အထူးအဘယ်အရာကိုမျှ။
လူဇင်ဘတ် - အလွန့်အလွန်မြင့်မားတဲ့နှုန်း-ဦးချင်းဝင်ငွေ။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အခြားတရားစီရင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိုအပ်သောကြောင့်-လုံ့လဝီရိယ၏အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့်အတူစျေးကြီးသည်။ ခိုင်မာတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ။
မကာအို - အထူးအဘယ်အရာကိုမျှ။
Madeira - သင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဝင်ငွေခွန်ပါဘူးတဲ့တိုင်းပြည်မှာနေထိုင်အထူးသဖြင့်လျှင်မျှမျှတတကောင်းသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။ အတော်များများကအခွန်လွတ် options များ။
မေလးရွား - သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြီးရှာဖွေပါ။ သင်တစ်ဦးမလေးရှားမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဤမျှလောက်ဘူး။ အများစုမှာကုမ္ပဏီများမှဒေသခံပိုင်ရှင်တွေ, ရုံးများ, အရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်းများကိုရှိရမည်။
မော်လ်ဒိုက် - ကျနော်တို့ကဒီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအများကြီးမသိရပါဘူးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ 30 နှစ်ပေါင်းအတူဖြစ်ကောင်းတစ်ခုခုကပြောပါတယ်သော။ ဒါကြောင့်အထူးကြီးဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ကအကြောင်းပိုမိုစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီလိမ့်မယ်။
မော်လ်တာ - မဆိုးပေမယ်ထူးချွန်ဘာမျှမစိတ်ထဲမှကြွလာသောဒါ-ဒီတော့အခွန်ဆိပ်။
မာရှယ်ကျွန်းစု - တစ်ဦးကအမေရိကန်ပိုင်နက်။ သို့သော်ဘာမျှထွက်ရပ်ထက်ထက်အခြား။
မောရစ်ရှ - ပိုကောင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏တစ်ခုမှာ။ US မှာသူတို့အဘို့ထက်ဥရောပတိုက်ဘို့ကပိုလူကြိုက်များ။ အဆိုပါ GBC ငါတစ်ဖန်စီအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် "ဟုဒေသခံကုမ္ပဏီ။ " နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး GBC II ၏ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
မက္ကစီကို - သင်မက္ကစီကိုစီးပွားရေးလုပ်နေတာနေတယ်ဆိုရင်, ထိုသို့သွားပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဘယ်သူမျှသိသိသာသာအကျိုးခံစားခွင့်။
Micronesia - တစ်ဦးကအမေရိကန်ပိုင်နက်။ သို့သော်ဘာမျှထွက်ရပ်ထက်ထက်အခြား။
မိုနာကို - တင့်တယ် (နှင့်စျေးကြီး) နေရာအရပ်။ ဒါပေမယ့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒကိုအထူးအချည်းနှီးဖြစ်၏။
မွန်တီနီဂရိုး - အဘယ်အရာကိုမျှကောင်းမကောင်းအဖြစ်ထွက်ရပ်။
မွန်ဆာရတ် - အဘယ်အရာကိုမျှကောင်းမကောင်းအဖြစ်ထွက်ရပ်။
မော်ရိုကို - မြောက်အာဖရိကရှိအစ္စလာမ့်တိုင်းပြည်။ အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သင်ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်, မဟုတ်လျှင်ဒီမှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ထက်ဤလှပသောကုမ္ပဏီသွားရောက် သာ. ကောင်း၏။
Nauru - အဘယ်အရာကိုမျှသည်အခြားတရားစီရင်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကအထူးသဖြင့်ကောင်းမကောင်းထွက်ရပ်။ Nauru ကျွန်း IBCs 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုရရှိနိုင်မျှအခွန်, လျှို့ဝှက်ချက်များ, privacy ကို, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, လျင်မြန်မှတ်ပုံတင်ရှိသည်, တစ်ခုတည်းရှယ်ယာရှင်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာမျှနိမ့်ဆုံးမြို့တော်နှင့်အင်္ဂလိပ်အရာရှိတစ်ဦးဘာသာစကားဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နယ်သာလန် - ခိုင်ခံ့သောစီးပွားရေးကို။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်သင်ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
နေးဗစ် - ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်စျေးနှုန်းများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (LLCs), လွယ်ကူခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းအကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဆိပ်။ အန္တရာယ်ကင်း (သူတို့ရဲ့စိန့်ကစ်အိမ်နီးချင်းမတူပဲ) နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အနိမျ့ရာဇဝတ်မှု။ ဥပဒေများမှန်မှန်ခေတ်သစ်တောင်းဆိုချက်များကိုအတူတက်ထားရန်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနှင့် LLC ရုပ်ပွားတော်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တရားစွဲဆိုမှုအထုံးအဖွဲ့တို့အနေဖြင့်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
နယူးဇီလန် - ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့, တည်ငြိမ်အစိုးရ။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် privacy အဘို့, နယူးဇီလန်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုသောနှစ်ပေါင်းများစွာက၎င်း၏အတောင်အောက်၌ကွတ်ကျွန်းစုများခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သင်သို့သော်ဤနေရာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်လိုလျှင်ဒီမှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။
နီကာရာဂွာ - ကမ်ဘာပျေါမှာအန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံများတစ်ခုမှာ။ ဤနေရာတွင်ကုမ္ပဏီများသည်အကြောင်းကိုအထူးအဘယ်အရာကိုမျှ။
နီယူး - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက် A ကောင်းဆုံးရှေးခယျြမှု။ အဖြစ်ကွတ်ကျွန်းစုများနှင့်နေးဗစ်အဖြစ်ကောင်းသော, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုရဲ့များစွာကိုရှာအံ့သောငှါအဘယျသို့များအတွက်ပိုကောင်းတရားစီရင်မှု၏တဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူး။
ပနားမား - အခွန်နှင့် privacy ဆိပ်အဖြစ်ယခင်အလွန်လူကြိုက်များ။ ဆဲပိုကောင်းတရားစီရင်မှု၏တဦးတည်းပေမယ့်နေးဗစ်သို့မဟုတ်ကွတ်ကျွန်းစုတစ်ဖယောင်းတိုင်ကိုင်မထားဘူး။
ဖိလစ်ပိုင် - သင်ခေါ်ဆိုမှုစင်တာကိုစတင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ဒီမှာကုမ္ပဏီစတင်အကောင်းတစ်ဦးက start ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုလန် - အဘယ်ကြောင့်သင်ပိုလန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ချင်မလဲ? ငါတို့မသိဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ပြုမိလျှင်, ငါတို့သည်တလုံးတဖွဲ့စည်းရန်နိုငျသညျ, ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ။
ပေါ်တူဂီ - ကျနော်တို့ဒီမှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတစျဦးလိုအဘယ်ကြောင့်မသိကြပေမယ့်သင်ဖြစ်ကောင်းကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်များကြပါလျှင်။ သင်တစ်ဦးအား PayPal သို့မဟုတ်အမေဇုံအကောင့်ချင်သောကွောငျ့တစျခုဖွစျနိုငျသညျ။
Puerto Rico - အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ခုပဲအခွန်အကြိုးခံစားခှငျ့။ သင်၏အခွန်အကြံပေးနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။ ကျနော်တို့ကဒီမှာကုမ္ပဏီအများအပြားတည်စေပြီ။
ရိုမေးနီးယား - သင်ရုံတချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဒီမှာကုမ္ပဏီလိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်အထူးအဘယ်အရာကိုမျှ။
ရုရှားနိုင်ငံ - သင်ကရေနံမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ရွှေဒီမှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းထားခံရဖို့မဖြစ်မနေပိုက်ဆံရှိစေခြင်းငှါ, စိန်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီမှာတဦးတည်းတည်ထောင်နိုင်ပါတယ်မလွယ်ကူသောနေရာအရပ်။
ဆာမိုအာ - ပိုကောင်းတရားစီရင်မှုတစ်ခုမှာ။ ယင်း၏ကွတ်ကျွန်းစုများအိမ်နီးချင်းပေမယ့်အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ကောင်းသောဘူး။
ဆားဘီးယား -Doo - လူများဟာမြင့်မားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းက (40%) အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ဘယ်မှာနိမ့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူတစ်တိုင်းပြည်တွင်ဥရောပတိုက်သားကိုငှားရမ်းလိုပါသလား? ဥပမာအိုင်တီလုပ်သားများ, ဒါကအကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
seychelles - ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဟေဗန်တစ်ခုမှာ။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်။ အမေရိကန်လူတို့အဘို့အလွန်အဆင်မပြေအချိန်ဇုန်။ ဥရောပတိုက်သားများအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေ။
ရှန်ဟိုင်းလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုန်ကုမ္ပဏီ - လုပ်ကိုင်ရန်ခွင့်ပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအမျိုးအစားများအတွက်အလွန်တင်းကျပ်။ ဤစာရင်းတွင်အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကြီး, ဖွဲ့စည်းရန်အချိန်-စားသုံးခြင်းနှင့်စိတ်ရှုပ်စရာ။ သင်ဒီမှာနေတဲ့ကုမ္ပဏီ get လျှင်မူကား, သင်ရုံကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံးဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူတစ်ဦးကုမ္ပဏီထူထောင်ကြပေမည်။
စင္ကာပူႏုိင္ငံ - ဘဏ္ဍာရေးသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ဖွဲ့စည်း၏လွယ်ကူခြင်းအဘို့အအာရှအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာများတစ်ခုမှာ။ ဟောင်ကောင်နောက်ကွယ်မှသော်လည်းဒုတိယနေရာ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်နိုင်သည့်လိုအပ်အနည်းဆုံးတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်။ စင်္ကာပူမှာနေတဲ့ဒါရိုက်တာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာအဖြစ်စင်္ကာပူနေထိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။
ဆလိုဗက်ကီး (SRO) - အကျိုးကျေးဇူးများကအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်: 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, privacy ကို, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင် / တစျခုညွှန်ကြားရေးမှူး, အနိမ့်ရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်အီးယူအဖွဲ့ဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျအီးယူအတွက်ကုမ္ပဏီလိုအပ်တယ်ဆိုရင်, ဒီကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
စပိန် - သင်စပိန်အတွက်ကုမ္ပဏီလိုအပ်လျှင်, ကျနော်တို့ကကူညီနိုင်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး privacy ကို သာ. ကောင်း၏ရွေးချယ်မှုများမှာအခြားတရားစီရင်မှုရှိပါတယ်။ ဒီအရေးအသားကနိမ့်ဆုံးမြို့တော် 60000 ယူရိုထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။ သင့်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမတိုင်မီဘဏ်သို့ကြောင့်ပမာဏ၏တဦးတည်းစတုတ္ထ၏ဘဏ်သို့သိုက်အောင်, ဒါမှမဟုတ် 15000 ယူရိုအကြောင်းကိုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
စိန့်လူစီယာ - သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တစ်ဦးကလှပသောနေရာအရပ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေများအကောင်းပေမယ့်ထူးချွန်ချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏။
စိန့် Maarten - နိုင်ငံခြားသားများသည်အသုံးအများဆုံးကုမ္ပဏီအမျိုးအစားဒတ်ခ်ျအတွက် BV သို့မဟုတ် "Besloten Vennootschap" ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်သာလန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်, သူတို့ရဲ့အဓိကဘာသာစကားဒတျချြဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကျယ်ပြန့်ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေများအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီများသည်ဥပဒေရေးရာဖြစ်ကြသည်။ အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်နေးဗစ်အဖြစ်ကောင်းသောဒါပေမယ့်ထည့်သွင်းရန်နေရာကောင်းမရ။
စိန့်ဗင်းဆင့် - ထည့်သွင်းရန်တစ်ဦးကအဆင်သင့်သောအရပ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်၎င်း၏အိမ်နီးချင်း, နေးဗစ်, သကဲ့သို့ကောင်းသောဘူး။ တစ်ဦးကလျောက်ပတ်သောဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုအခြိနျမှနျမှစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိပါသည်သော်လည်း။
ဆူရာနမ် - အစိုးရအရာရှိများ၏ရာဇဝတ်မှု, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုအမြားအဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဆူရာနမ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (NV) စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, privacy ကိုလည်းတ certified ရရှိထားပြီးဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူအသုံးပွုနိုငျကွောငျးသာညွှန်ကြားရေးမှူး, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, နှင့်အင်္ဂလိပ်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်ပေးထားပါတယ်။ သင်ဒီမှာနေတဲ့ကုမ္ပဏီလိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်ဥပဒေများကိုအထူးချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏။
ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ - ခိုင်ခံ့သောစီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအရတည်ငြိမ်။ အင်္ဂလိပ်လူတိုင်းနီးပါးအားဖြင့်ပြောပြီ။ မြင့်မားသောအခွန်။ သင်ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုခငျြသောကွောငျ့သငျသညျကုမ္ပဏီလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ။ ကျနော်တို့တဦးတည်းဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီအမျိုးအစားပေါဘို့ငွေသား stash ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ဆွစ်ဇလန် - ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီတွေဟာထက်ပိုကောင်းတဲ့ဒီမှာဘဏ်များကြိုက်တယ်။ မပြည့်စုံသတင်းပုံပြင်များဆွစ်ဇာလန်ကဖြစ်လေ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစင်တာမဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ Lay ကလူဦးတည်သွားစေ။ သေချာပေါက်ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကပဲလူတွေကိုတော့ဘူးအခွန်ရှောင်မှုကိုအဘို့မိမိတို့တိုင်းပြည်ကိုသုံးပါမသွားပါစေလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဘဏ်စနစ်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားပါကအကြံပြုပါသည်။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, သို့သော်အရည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုင်ဆောင်မှုအတွက်သိသိသာသာအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မပါဘဲအတော်လေးစျေးကြီးသည်။ ပိုကောင်းနေးဗစ်အတွက် LLC ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်။ သင်ဒီမှာဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် ပတ်သက်. ဝက်သန်းဒေါ်လာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ထုိင္းႏုိင္ငံ - ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအများအပြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဒီနေရာမှာသုံးလအဘို့ဤအရပ်၌အသက်ရှင်။ , ပိုကြီးတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာအနိမ့်အလုပ်သမားစရိတ်နှင့်လျောက်ပတ်သောပညာရေးရှိပါတယ်။ ပြင်ပကျေးလက်ဒေသပိုပြီးလက်စွဲစာအုပ်-အလုပ်သမား-based ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအဝတ်အစားအဖြစ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်လိုပါကဤနေရာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။
ကြက်ဆင် - အများစုကပေါ်ပြူလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တဦးတည်းပိုင်ရှင်လိုအပ်သည်။ သင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းငွေသွင်းရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သော 10,000 ကွိုးစား၏နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်။ သူတို့ကုမ္ပဏီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောပိုက်ဆံကန့်သတ်ထားသည့်ရှယ်ယာရှင်များ၏တာဝန်ယူမှု။
တူရကီနှင့်ကိုင်းကော့စ် - ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးများအတွက်မျှမျှတတကောင်းသောရွေးချယ်မှု။ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီ၏ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအသစ်ကအခွန်ဥပဒေများလာမည့် 20 နှစ်ကျော်ချမှတ်ထားပါသည်လျှင်ပင်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်။ အများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်ပိုင်ရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများမဟုတ်ပါဘူး။ အစာရှောင်ခြင်း2ရက်ကြာဆွဲသွင်းပါဝင်။ တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူး / ရှယ်ယာရှင်ကုမ္ပဏီများသည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများအစီရင်ခံရန်မလိုပါ။ ဗြိတိန်မှီခိုနှင့်အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပိုအများဆုံးထက်ဒီတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုကြိုက်တယ်။
Tuvalu - တောင်ပစိဖိတ်သြစတြေးလျ၏အရှေ့မြောက်ဘက်နှင့်ဟာဝိုင်ယီကျွန်း၏အနောက်တောင်ဘက်၌။ Tuvalu အဘိဓါန် IBCs တရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ် 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုမရှိအခွန်ငွေ, လျင်မြန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, privacy ကိုအဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, ကန့်သတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ယူမှု, နှင့်အင်္ဂလိပ်ရှိသည်။ တစ်ဦးကမျှမျှတတကောင်းသောရွေးချယ်မှု။ ကျနော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်ပိုကောင်းကွတ်ကျွန်းစုကြိုက်တယ်။
အမေရိကန်ဗာဂျင်ကျွန်း (USVI) - ကြီးမားတဲ့အလားအလာကော်ပိုရိတ်အခွန်အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့တစ်ဦးကအမေရိကန်ပိုင်နက်။ ယစ်မျိုး, စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စုစုပေါင်းလက်ခံရရှိအခွန်အခများအပေါ်% ကင်းလွတ်ခွင့် 90 တစ် 100% အခွန်လျှော့ချရေးမှတက်နဲ့တက်အပါအဝင်ဤနေရာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွင့်သူကလူတို့အဘို့အဆင်သင့်အခွန်မက်လုံး။ တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်နှစ်ယောက်ဒါရိုက်တာများလိုအပ်ပါသည်။ အမေရိကန်ကထောက်ပံ့ပေးကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်တည်ငြိမ်စီးပွားရေး friendly ။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး), - ကဒီမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ကုမ္ပဏီများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ပညာတတ်ပညာရှင်များကိုဆွဲဆောင်ဒေသခံစီးပွားရေးကိုအကျိုးအမြတ်၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒေသဆိုင်ရာ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် LLCs 51% ဒေသခံပိုင်ရှင်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ အခမဲ့ဇုန်ကုမ္ပဏီများမှ 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်တွေရှိသည်နိုင်ပေမယ်သာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့အမျိုးအစားများကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်နိုင်ပြီးသာဆိပ်ကမ်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိမြေကွက်တစ်အသေးစားချွတ် (s) တွင်ရှိရုံးခန်းငှားရမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်ရှိသည်နှင့် 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ယူအေအီးအတွက် multi-ငွေကြေးအကောင့်ကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Rak ကမ်းလွန် နှင့် Rak အင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ အဆိုပါလိုအပ်နေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိနေခြင်းခြင်းမရှိဘဲကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ဖြစ်ကြသည်။ ကယူအေအီးအထဲမှာအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်မှအဖြစ်အလွန်တင်းကျပ်။ မြို့ပြကုမ္ပဏီ ထိုကဲ့သို့သောဆေးသမား, ရှေ့နေများ, အင်ဂျင်နီယာများနှင့်စာရင်းကိုင်အဖြစ်ပညာရှင်များများအတွက်မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဒေသခံဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့်များသောအားဖြင့်လိုအပ်ပါသည်။ တူညီသောလယ်ပြင်၌ပါလျှင်တစ်ဦးကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း-ပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (ဗြိတိန်) - အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောကုမ္ပဏီသင်ဥရောပတိုက်တွင်တဦးတည်းမလိုအပ်ပါ။ အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း။ ကောင်းပြီ-လေးစား, တည်ငြိမ်အစိုးရ။ ဆက်ဆက်ဗြိတိန်ကတည်းကပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်မရာအရပျနိုင်ငံခြားစီရငျခကျြကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်းနှင့်ပြဋ္ဌာန်းရန်ပါဘူး။ တစ်ဦးကို PayPal သို့မဟုတ်အမေဇုံအကောင့်လိုအပ်နေသူတွေအတွက်ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်နိုင်ပါစေ။
ဥရုဂွေး - တောင်အမေရိက၏ဆွစ်ဇာလန်အဖြစ်လူသိများဒီမှာဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီများနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ဝင်ငွေရ, မအခွန်ခွဲဝေအခွန်မပေးပါဘူး။ အဆိုပါဥရုဂွေး LLC တောင်အမေရိကအတွက်သာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် entity ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်သာတိုင်းပြည်အတွင်းကနေရရှိခဲ့အမြတ်အစွန်းအခွန်အခများ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသက်ရှင်နိုင်သူနှစ်ဦးရှယ်ယာရှင်များနှင့်တဦးတည်းဒါရိုက်တာလိုအပ်ပါသည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ယူရိုကျယ်ပြန့်လက်ခံလိုက်တယ်။ နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်တိုက်ကြီးအပေါ်အကောင်းဆုံးစာတတ်မြောက်ရေးမှုနှုန်းနှင့်အတူ။ မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာ။ နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အဘယ်သူမျှမကမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်။ ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကဒီတာသတိမမူပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ဥရုဂွေး LLC နှင့်အတူအရေးပါသောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုတွေ့ကြပြီမဟုတ်။
ဗာနူအာ - ဟာဝိုင်ယီနှင့်နယူးဇီလန်၏မြောက်အမေရိက၏အရှေ့တောင်တစ်ဗာနူအာကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီ 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုမရှိအခွန်ငွေ, privacy ကိုကမ်းလှမ်းအများစုအစိုးရ FILE ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရနေပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်နိုင်သူတစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်သုံးခုအရာရှိတဦးကဘာသာစကားများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒေသတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအဘို့အရပါမည်ကွတ်ကျွန်းစုများကဲ့သို့လုပ်ပါ။